सडक संजालमा जोडीदै पलाँता, डोजर पुगेपछि अबिर जात्रा
कालिकोट । जिल्लाको पलाँता गाउँपालीका सडक संजालमा जोडीएको छ । जनयुद्धको वेला सरकारी सेना द्धारा मारिएका परेग शाही उपनामका मुनालको नाम वाट नामकरण गरिएको मुनाल मार्ग निर्माण कार्य सुरु भएपछि पलाँता ९ संडक संजालमा जोडीएको हो ।
वडापालिका सम्म मोटरबाटो खन्दै डोजर पुगेपछि स्थानीयले अविर जात्रा गरेका छन् । मुनाल मार्गको दुई किलोमिटर सडकको ट्याक खोलिसकिएको अध्यक्ष लक्ष्मण बमले वताए । उनले भने यस मार्गमा ५० जना कार्यदलका सदस्यले काम गरिरहेका छन ।
आगामी २ बर्षमा प्रत्येक वडा पालिकामा मोटरबाटो पु¥याउने तयारीका साथ काम भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष बमले बताए । सडक बिकासको पहिलो खुड्कीला भएकाले गाउँपालिकाले सडक निर्माण थालेको वडा नं. ९ का अध्यक्ष टक्कबहादुर बमले बताए । गाउपालिकाले आफ्नै वजेटमा डोजर पन िखरिद गरेको छ । नयाँ डोजर गाउमा पुगेपछि स्थानिय र जनप्रतिनिधिहरुले अबिर जात्रा समेत गरेका छन ।
सडक निर्माण भएपछि सदरमुकाम देखि तीन दिन पिठ्युमा भारी भोकेर पेट भर्ने समस्याको अन्त्ये भएको साविकको धौलागोह निवासि सुमन बमले बताए । सडक निर्माणमा यस बर्ष मात्र गाउँपालिकाले ४ करोड ५० लाख बजेट बिनियोजन गरेको प्रशासकीय अधिकृत लेखबहादुर क्षेत्रीले बताए । उनले भने सबै भन्दा वढि वजेट हामीले सडकमा बिनियोजन गरेका छौ ।
गाउँपालिकाले वडा नं. ६ को ओदी, जाँफे, छलाहाँ सडक खण्ड, वडा नं. ९ को अशोक र मुनाल मार्गको निर्माण कार्य सुरु गरेकोे छ । आँदी चन्द चौपाने अशोक र परेग वहादुर शाही मुनाल युद्ध कालमा सरकारी फौजवाट मारिएका स्थानिय हुन । स्थानीय कार्यदल बाट सडक निर्माण कार्य ढिलो हुने भएपछि गाउँपालिकाले डोजर मार्फत मार्ग निर्माण कार्य अघि बढाएको हो । डोजरले वाटो खन्दै जान्छ, निमार्ण कार्यदलका सदस्यले त्यसलाई थप सुधार गदै लैजाने अध्यक्ष बमले वताए । डोजरले बनाएको मार्गमा वाल लगाउने, ग्यामिन जाली भर्ने लगाएतका कार्य कार्यदलले नै गर्ने छन् ।
गाउमा जोडर पुगेपछि गाउ कार्यपालिका र स्थानियले अबिर जात्रा गरेर खुसियाली मनाएका छन । पलाँता गाउपालिकाको वडा नं ९ को सिमानामा कर्णाली करिडोरले पनि छोएको छ । कर्णाली करिडोरले छोय संगै जोडर पुगाउन र गाउपालिका क्षेत्रमा सडक बिस्तार गर्न सजिलो भएको हो । कर्णाली करिडोरको निमार्ण नेपाली सेनाले गरिरहेको छ ।